Fiber Optical yakavharika Vagadziri & Vatengesi | China Fiber Optical Yakakomberedzwa Fekitori
FTTH Fiber Optical Chiso Bhokisi ZJ86
Mukupfupisa Iyi 86 dhizaini yekuparadzira bhokisi rinoshandiswa zvakanyanya muFTTX network kubatanidza donhwe tambo uye ONU zvishandiso kuburikidza nefibre port. Inotsigira kukanda, kugovera, mehendi yekubatanidza uye kumadziro yakamisikidzwa kumisikidzwa. Iko kugona kweiri bhokisi kunogona kuve 2cores. Zvimiro ● Zvinhu zveABS zvinoshandiswa zvinoita kuti muviri uve wakasimba uye wakareruka ● Kuiswa kuri nyore: Kukwira pamadziro ● Kushanda zviri nyore: plug fiber isina chikonzero chekuvhura goko ● Fibhi tambo inlet kubva kumativi ese, ichitsigira tambo dzemukati f ...
OTC-S Fiber Optical Yakakomberedzwa
Kunyorera uye Feature ● Inogona kushandiswa mukutwasuka-kuburikidza uye kubazi kunyorera tambo dzebunchy fiber uye ribhoni fiber; ● Inokodzera zvemuchadenga kana zvikwiriso zvine madziro. ● Dzokorora zviri nyore; ● Slide-N-Lock fiber optic splice tireyi ine kona yayo yekuvhura pamusoro pe 90 ° C; ● Matireyi anogona kuwedzerwa uye kuderedzwa zvinoenderana nechishandiso; ● Chikamu chepurasitiki chakagadzirwa neepamusoro-simba PC mainjiniya epurasitiki, iyo inovimbisa kuita kwakakwana mune anti-aping uye simba; ● Kuita mushe ...
OTC-O Fiber Optical Yakakomberedzwa
Idzo dzimba dzeOTC-O dzakatenderedza uye dzakagadzirwa seyakamira-kumusoro mamiriro, iyo yakagadziriswa uye yakasimbiswa neakakosha hoop, uye yakashanda zviri nyore. Kune mafoure inlet / outlet ports. Chiteshi chakavharwa ne screw cap. Mushure mekunge tambo yaiswa kuburikidza nechiteshi, wobva wadzora sikuruu chivharo, ipapo chiteshi chinozovharwa. OTC-O yaifanirwa kuchengetedza mhando dzetambo, chiyero chekushandisa chinosanganisira zvemuchadenga, pasi pevhu nepombi. Iyo OTC-O inogadzirwa neyakanyanya kusimba PC mainjiniya epurasitiki, w ...
Horizontal Fiber Optic Yakakomberedzwa (FOSC) OTC-M
1. Makuriro ekushandisa Iyi Sutu Yekuisirwa masutu eiyo Fibre Optic Splice Kuvhara (Pano pfupikiswa seFOSC), sekutungamira kwekuisirwa kwakakodzera. Chiyero chekushandisa ndechekuti: eiri uye kumisikidza -madziro. Iwo ambient tembiricha anotangira -40 kusvika 65 ℃. 2. Chimiro chakakosha uye kumisikidza 2.1 Kukura uye kugona Kunze kwechimiro (LxWxH) 280x200x90 (mm) Kurema (kusasanganisa bhokisi rekunze) 1200g-1500g Nhamba yeinopinda / inoburitsa chiteshi max. Zvidimbu zvina Dhayamita yefaera tambo Φ8 — -14 ...
OTC-J Fiber Optical Yakakomberedzwa
Kunyorera uye Feature ● Inogona kushandiswa mukutwasuka-kuburikidza uye kubazi kunyorera tambo dzebunchy fiber uye ribhoni fiber; ● Inokodzera zvemuchadenga, dhizaini, kana kuvigwa kunyorera; ● Dzokorora zviri nyore kuvhura Slide-N-Lock fiber optic splice tray nekiyi yekuvhura pamusoro pe 90 ° C; ● Matireyi anogona kuwedzerwa uye kuderedzwa zvinoenderana nechishandiso; ● Chikamu chepurasitiki chakagadzirwa neepamusoro-simba PC mainjiniya epurasitiki, iyo inovimbisa kuita kwakakwana mune anti-aping uye simba; ● Kuita kwakakwana mu ...
OTC-F Fiber Optical Yakakomberedzwa
Dzimba dzeOTC-F dzakatenderedza uye dzakagadzirwa seyakamira-kumusoro mamiriro, iyo yakagadziriswa uye yakasimbiswa neakakosha hoop, uye yakashanda zviri nyore. Kune matanhatu ekupinza / ekuburitsa chiteshi. Chiteshi chakavharwa nehurefu hunodzora ruoko rwokudzivirira. Mushure mekunge tambo yaiswa kuburikidza nechiteshi, ruoko rwakapisa, ipapo chiteshi chinozovharwa uye tambo yakagadziriswa. OTC-F yaifanirwa kuchengetedza mhando dzetambo, chiyero chekushandisa chinosanganisira zvemuchadenga, pasi pevhu nepombi. Iyo OTC-F ndeye ma ...
OTC-E Fiber Optical Yakakomberedzwa
OTC-A Fiber Optical Yakakomberedzwa
IP65 16ports FTTH Fiber Terminal Bhokisi
Kunze IP65 16ports FTTH fiber terminal bhokisi inowanikwa yekuparadzira uye yekubatanidza kweinongedzo yemhando dzakasiyana dze optical fiber system, kunyanya inokodzera mini-network terminal kugovera, mune iyo tambo dzemaziso, chigamba cores kana pigtails zvakabatana. Zvimiro: Asina-chisimbiso mhando, yakatarwa nechaiti. Matambo maviri emadhodhi emukati waya tambo yekubatanidza Nyore kushanda, ine yakakwira ine kugona kweiyo yakawandisa pigtails Inogona kubatanidza / kubatanidzazve kune maadapter anodarika mazana maviri nguva Chibatanidza che ...